Visio ... aka ... People Wonder ရှာဖွေနေတာငါဘာကြောင့် Mac ပေါ်ထွက်ရတာလဲ Martech Zone
Visio … aka … People Wonder ဘာကြောင့်ငါ Mac ကိုလာရတာလဲ
သောကြာနေ့, မတ်လ 28, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
လူတွေကလူတွေကငါဘာကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုအရင်တုန်းကလောက်အသုံးမပြုခဲ့တာလဲလို့တွေးမိကြတယ် အချို့လူများက PC / Mac တစ်ခုလုံးသည်ဟာသတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ ငါထင်တယ် Mac နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါ အရာလည်းဟာသပဲ။ င်း မဟုတ်။ ငါတရားဝင်များအတွက် Mac ယခုခဲ့ပါ တစျနှစျ.
Mac တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အဆိုးဆုံးမှာ PC ပေါ်တွင်လည်းအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါနေ့တိုင်းအလုပ်မှာအဲဒီလိုလုပ်ပါ။ ငါမကြာသေးမီက Vista (hibernation ပြီးနောက်အပြာရောင်မြင်ကွင်းများ) ကို load လုပ်ပြီး Microsoft Visio Standard Edition ကို download လုပ်၍ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ လွယ်ပါတယ်၊ ငါအဲဒါကိုမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကနေဝယ်ယူလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။
ငါကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရပ်, Microsoft Download Center ကိုသွားပါ။ Silverlight ရဲ့ beta တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Microsoft Download Center ကိုသွားပါ။ ငါ“ Visio” ကို“ search downloads” နေရာတွင်ရိုက်ထည့်သည်။ ဒီနေရာမှာရလဒ် ၁၁၉ ချက်နဲ့ပထမဆုံးပေါ်လာတာ။
ပထမဆုံးအဆင့်ရလဒ်ကဘာလဲ။ လုံးဝ Visio မဟုတ်ဘူး 2007 Microsoft Office Add-in - PDF သို့မဟုတ် XPS အဖြစ် Microsoft သိမ်းသည်။ ဟမ်လား (ပထမရလဒ်သည်အဆင့် (၃၁) အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ပင်တွက်ဆရန်မကြိုးစားပါ။ ) ရလဒ် ၁၀၀ ကိုပြသရန်ကျွန်ုပ်ဖတ်၊ ခွဲ၊ ဖတ်၊ ခွဲ၊ ချဲ့ပြီးချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ Visio ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ကြည့်ရှုသူအချို့နှင့်အခြားကင်ဆာတစ်မျိုး။
ရုံးဆိုဒ်ကိုပိတ်ထားပါ။ အွန်လိုင်းမှာ Visio ကို ၀ ယ်လိုက်တာနဲ့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှတစ်ဆင့်စတိုးဆိုင်ကိုပြန်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါအနည်းငယ်န်းကျင်ရိုင်းစိုင်းပေမယ့်ငါရှာတွေ့ ... Visio Standard Edition ကို။ ထိုအခါလက်ဝဲ sidebar မှာ…ယခင်ဝယ်ယူမှု! Yahoo !!!! … er …ငါ Wahooo ကိုဆိုလိုတာ !!! ငါအရင်ဝယ်ယူမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ငါ့ငွေတောင်းခံလွှာနံပါတ်ပေါ်လာ။ ဟုတ် !!!! နီးပါးရှိတယ် !!!! ငါဝယ်ယူမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဤငါရတယျ
Ouch ။ ကျွန်တော် Internet Explorer7ကိုတောင်သုံးနေတယ်။ Firefox မှာတောင်မှဒီဟာကိုမစွန့်ဘူး။ ကျွန်ုပ်ကွတ်ကီးများကိုရှင်းပါတယ် ငါပြန်သွားလာ, ငါ့ငွေတောင်းခံလွှာကိုနှိပ်ပါ ... နှင့် ... ။
မိုက်ကရိုဆော့ကိုနို့တိုက်ကျွေးတယ်။ ဝဘ်တွင်ပိတ်ခြင်းသည်သင်နို့စို့! ယနေ့ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းကိုကျွန်ုပ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်မပြီးနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်စိတ်ပျက်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကြောင့်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ထပ်၍ မရနိူင်သော်လည်းကျွန်ုပ်မ download လုပ်နိုင်။ မသုံးနိုင်ပါ။
ငါဘာကြောင့် Mac ကိုရောက်နေရတာလဲလို့လူတွေကတကယ်တွေးမိတယ်။
အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက Microsoft Brand သည်အဘယ်ကြောင့်ကျဆင်းနေသနည်း။ Microsoft ၀ န်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်တွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊
Fired: MyBlogLog နှင့် BlogCatalog Widgets
မတ်လ 28, 2008 မှာ 4: 05 pm တွင်
ဟုတ်တယ်၊ ငါလည်း M$ ကြွက်တက်နေတယ်။ ကျွန်တော် မကြာသေးမီက Outlook 07 တွင် သင်္ဘောကိုခုန်ချပြီး Mozillas Thunderbird သို့သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ပျော်သည်။ M$ ရုံးသုံးအမှိုက်တွေ ရှင်းဖို့ မကြာခင် ဖွင့်လှစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုကျွန်ုပ်၏စက်များတွင် linux မှလွဲ၍ ဘာမျှမသုံးဘဲ ခုန်ကူးရန် အမှန်တကယ် စဉ်းစားနေပါသည်။ ၎င်းသည် နှောင်းပိုင်းတွင် အလွန်အသုံးပြုရလွယ်ကူလာခဲ့ပြီး winblows ဆော့ဖ်ဝဲအများစုသည် ယနေ့ကာလတွင် linux နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။
mac ရဖို့ သတ္တိရှိရင် မသေချာဘူး။
မတ်လ 28, 2008 မှာ 5: 36 pm တွင်
အိပ်မက်ဆိုးကြီးပါလား!!! Microsh*te လူတွေ သင်ယူတဲ့အခါ.... Microsoft သည် Mac သို့ပြောင်းကာ Microsoft ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်လိုက်သောအခါတွင် ကော်ပိုရိတ်အသိုင်းအဝိုင်းမှ ၎င်းတို့သည် အချိန်နှင့်ငွေကုန်သက်သာစေမည်ကို ရုတ်တရက်သိလိုက်သောအခါ Microsoft သည် အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေပါသည်။
မတ်လ 28, 2008 မှာ 7: 57 pm တွင်
သို့သော်လည်း၊ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုလိုက်သောအခါတွင်၊ သင်၏ထည့်သွင်းမှု၏အောက်ခြေရှိ သင်၏ Google Ads လင့်ခ်သည် Office 2003 နှင့် 2007 ကို ဝယ်ယူရန် လင့်ခ်များရှိသည်။
အခြား Office များနှင့် ရောနှောထားသော ဘေးဘက်ရှိ Mac ကြော်ငြာများ။
တခါတရံမှာ စိတ်ဝင်တစားဆုံးအချိန်တွေမှာ အလိုအလျောက်ကြော်ငြာကုဒ်တွေ ပေါ်လာတာက တကယ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ "အချိန်ကိုက်" ကြော်ငြာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော သင့်ပို့စ်သည် ကျွန်ုပ်၏ညနေခင်းကို ဖြစ်စေခဲ့သည် 🙂
မတ်လ 28, 2008 မှာ 8: 32 pm တွင်
ဟား! ဘော့ဘ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ပေါက်ကွဲတဲ့အခါတိုင်း၊ သူတို့ရဲ့ ကြော်ငြာတွေက site ပေါ်မှာ ပေါ်လာပါတယ်။ ရယ်စရာကောင်းတယ်။
မတ်လ 29, 2008 မှာ 1: 08 AM
Open Office က ဒီမှာ 2.4 နဲ့ 3.0 က အဆင့်တစ်ဆင့် ပိုကောင်းလာမယ်။ Extensions တွေလည်းရှိတာကြောင့် LaTeX ကိုယနေ့ခေတ်မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
မတ်လ 29, 2008 မှာ 12: 23 pm တွင်
OmniGraffle Pro ကိုသုံးပါ။ Visio သည် ဝမ်းပျက်-အရသာရှိသည်။
ဧပြီ 1, 2008 မှာ 1: 38 pm တွင်
ငါ OmniGraffle Pro နဲ့လည်း ကံကောင်းခဲ့တယ်၊ Jason။ Visio (သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်အားဖြင့်) ဖိုင်-သဟဇာတဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ငါ့မှာ Visio သုံးတဲ့ ဖောက်သည်တွေရှိတယ်။
မတ်လ 29, 2008 မှာ 2: 36 pm တွင်
Mac သာ Mac People အားလုံးအတွက်မဟုတ်ရင် Mac က သိပ်မဆိုးဘူးဆိုတာ မင်းသိပါတယ်။" 😉
ဧပြီ 1, 2008 မှာ 1: 39 pm တွင်
ဟား! မင်းပြောတာမှန်တယ် Mike ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုက်မဲသောအဖွဲ့ဖြစ်သည် – အထူးသဖြင့် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်2ခုအတွင်း MS နည်းပညာများတွင် နက်နဲသော ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လူများ။
ဧပြီ 1, 2008 မှာ 12: 53 pm တွင်
Microsoft ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ အိုး၊ ငါအွန်လိုင်းမှာ ပြဿနာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပေမယ့် မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ အင်တာနက်၏ ယေဘူယျ စိတ်ချရမှု မရှိခြင်းကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် ဈေးကြီးသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်ဝယ်သော ပရိုဂရမ်အားလုံး၏ hard-copy များကို လိုချင်ပါသည်။ ကျောင်းဟောင်းတော့ သိတယ်။
အဲဒါက မထင်မှတ်ထားပေမယ့် Windows ထက် Macs နဲ့ Linux မှာ ပြဿနာပိုများပြီး open source ပရိုဂရမ်တွေက ကျွန်တော်နဲ့ ဘယ်တော့မှ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းကြောင့် မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည် (DOS လက်ထက်ကတည်းက ကွန်ပျူတာများကို အသုံးပြုနေပါသည်)။
ထို့အပြင် “Microsoft” ရေးသောအခါတွင် လူများသည် ဇာတ်ကောင်များကို အဘယ်ကြောင့် အစားထိုးသနည်း။ ဆိုလိုတာက ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးဖို့ Bill Gates ရဲ့ မသန့်ရှင်းတဲ့ အာဏာကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ တိုးအောင် ရေးပြလိုက်သလိုမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ မိုက်တယ်။
ဧပြီ 1, 2008 မှာ 1: 48 pm တွင်
ဤပို့စ်သည် ၎င်းတို့၏ဆိုက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုအပေါ် ကြီးမားသောထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိတ်ဆက်မှုမှာ Microsoft သည် ၎င်းတို့၏ အသုံးပြုသူများနှင့် အတန်ငယ် ချိတ်ဆက်မှု ပြတ်တောက်သွားသည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပြဿနာမှာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် မပတ်သက်ပါ (ယခုတစ်ကြိမ် ;)၊ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။
မှတ်မိသလောက်တော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ Microsoft သည် အနည်းငယ် ချဉ်းကပ်၍မရတော့ဘဲ ဦးတည်ချက်ကို ညွှန်ပြနေသည်... စံနှုန်းများကို မကျင့်သုံးသော ဘရောက်ဆာတစ်ခုရှိခြင်း၊ Microsoft-based အပလီကေးရှင်းများနှင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော လုံခြုံရေးမော်ဒယ်များကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းစံနှုန်းများကဲ့သို့သော အခြားစံနှုန်းများကို လျစ်လျူရှုခြင်းကဲ့သို့သော အရာများ။
ငါသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တာတွေကို လေးစားမှုများစွာရှိပေမယ့် အာကာသထဲက တခြားသူတွေအပေါ် သူတို့ရဲ့ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ ငါယုံကြည်ပါတယ်။ Steve Ballmer ဗီဒီယိုကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
ငါ့ကို အထင်မလွဲပါနဲ့ Jobs မှာလည်း သူ့အရည်အချင်းတွေရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Wired မဂ္ဂဇင်းကိုဖတ်ရင် သူက Jackass ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့အာရုံစူးစိုက်မှုက ပိုနေမြဲနေနေ အနေအထားကိုပြောင်းပြီး သူ့ရဲ့ 'ဘာသာတရား' အတွက် အရာတွေကို ပိုလွယ်ကူပြီး ပိုစတိုင်ကျအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
ဧပြီ 14, 2008 မှာ 4: 59 pm တွင်
မှတ်စုတစ်ခုအနေနဲ့၊ Microsoft က ဒီနေ့၊ 4/14/2008 မှာ ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်နဲ့ ထည့်သွင်းဖို့ ထုတ်ကုန်သော့တစ်ခုပါရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ဒေါင်းလုဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။